Faylkaygu wuu ka baxsan yahay soo kabashada. Maxay tahay meesha ugu dambeysa ee aan tago? - DataNumen
Haddii faylkaaga ay ka buuxsamaan dhammaan eberka markaad isticmaaleyso habkan si loo baaro, markaa ma jiraan xog dib loo soo celin karo oo ku jirta faylkaaga. Si kastaba ha noqotee, ha argagixin. Weli waxaa jira fursadaha inuu ka soo kabsado xogtaada, sida soo socota:
Disk / drive meesha faylkaagu ku yaal ayaa laga yaabaa inay weli ku jiraan xoogaa xog dib loo soo celin karo. Noocyada xogta qaarkood, sida Muuqaalka ama Outlook Express xogta, waad isticmaali kartaa DataNumen Outlook Drive Recovery or DataNumen Outlook Express Drive Recovery si aad u baarto diskiga / wadista oo aad uga soo kabato xogtaada. Noocyada kale ee xogta, sida SQL Server xogta keydka, waxaad marka hore abuuri kartaa sawir disk ama ku wadid DataNumen Disk Image, ka dib isticmaal DataNumen SQL Recovery in lagu baaro feylka sawirka lagana soo kabsado xogta adiga.
Wax kasta oo disk / drive ama keydinta ah oo warbaahinta ah oo aad u guurisay faylkaaga, ama faylkaagu hore u jiray, ayaa sidoo kale ku jiri kara xogta aad doonayso. Sidaas waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa habka isku midka ah ee xalka 1 inuu ka soo kabsado xogtaada.
Waxa kale oo aad sameyn kartaa in nala soo xiriir oo si faahfaahsan u sharax nidaamka oo dhan ee masiibada xogtaada. Waxaan u falanqeyn doonnaa kiiskaaga gacanta iyo si taxaddar leh si aan u eegno haddii ay weli jiraan fursado lagu soo kaban karo xogta qaab kasta oo aan dhaqameed ahayn.
soo kabashada ka baxsan, disk, sawirka sawirka, drive, miciinka ugu dambeeya
Sidee loo hubiyaa haddii feylkayga aan dib u soo ceshan karo naftayda?Waxaan rabaa muuqaal aan laga heli karin badeecadaada. Maxaa la sameeyaa